Sevastopol, ရုရှားဘုန်းအသမြင်ကွင်း, eager to 'go home' - သတင်း Rule
Sevastopol, ရုရှားဘုန်းအသမြင်ကွင်း, '' အိမ်သို့သွားလော့စိတ်အားထက်သန်’
အဆိုပါ ယူကရိန်းအလံ တကယ် Sevastopol နှင့်၎င်း၏ကျော်ကြားတဲ့ဆိပ်ကမ်းအတွက်နှုတ်ဆက်ပြီးဖူး, အိမ်သို့ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ အ tsars ၏အချိန်ကတည်းကပင်လယ်နက်ရေယာဉ်စု.
ထိုအခါမော်စကိုရိုင်းကျော်ကသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကဘိလပ်မြေအဖြစ်, ဒေသခံများကရသောအခါရုရှားအလံသူတို့နေ့ရက်ကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်လို့ပြော, ပြီးသားခပ်သိမ်းကိုသိပါသည်, တရားဝင်စံအဖြစ်ပျံသန်းဦးမည်.
၏ဤမြို့၌ 350,000 — အရင်ပြင်နှင့်လမ်းများပေါ်တွင်အ-Crimean စစ်ပွဲဒါမှမဟုတ်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုသူရဲကောင်းများများ၏အမည်များသယ်ဘယ်မှာ — အတွက်ယူကရိန်းရဲ့လွတ်လပ်ရေး 1991 စိတ်ထိခိုက်ခဲ့.
ဒါကြောင့်ဗစ်တာ Yanukovych ၏လိုလားသူကရင်မလင်စစ်အစိုးရကပြီးခဲ့သည့်လကကြေပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောအခါ, ထောင်ပေါင်းများစွာ၏သောင်းချီလမ်းများမှတဟုန်တည်းပြေး, ဗဟိုရင်ပြင်တဲ့အတွက်မနေ့တုန်းကနှင့်တစ်ဦးလိုလားတဲ့မော်စကိုစီးပွားရေးသမားကွှေးကျွောခွငျး, Alexei Chaly, မြို့တော်ရဲ့အသစ်မြို့တော်ဝန်အဖြစ်.
“Sevastopol များ၏နိုင်ငံသားများလူရမ်းကားနှင့်အတူအားလုံးဆက်ဆံရေးဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်, ကိယက်ဗ်ရှိအာဏာသိမ်းတဲ့သူရာဇဝတ်ကောင်နှင့်နာဇီ,” အိုင်ဗင် Komelov, Chaly ဖို့အကြံပေး, ကအေအက်ဖ်ပီကိုပြောသည်.
“အဘယ်သူမျှမရလဒ်သံသယ” မတ်လ၏ 16 ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာအပေါ်ရိုင်းအတွက်ဆန္ဒခံယူပွဲ, ဟုသူကပြောသည်.
“စဉ်အတွင်း 23 လွတ်လပ်ရေး၏အနှစ်, ယူကရိန်းသည်ငါတို့အဘို့အဘယ်အရာကိုမျှပြုတော်မူပြီ. ကိယက်ဗ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဆံ ယူ. ကြောင့်ဖွင့်. Sevastopol ၏လူတို့သည်မိမိတို့ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိခင်ရုရှားနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါ်ဆိုခဖြေဆိုနှင့်သူမ၏ရငျခှငျသို့ကျွန်တော်တို့ကိုယူမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။”
Chaly, သူကအီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၌သူ၏ကံဇာတာကိုဖန်ဆင်း, ရုရှားသူရဲကောင်းများ၏မှတ်ဉာဏ်မှအထိမ်းအမှတ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ဘဲလျက်အဘို့အ Sevastopol အတွက်လူသိများသည်.
သူတို့ကိုများထဲတွင်ဗလာဒီမာ Kornilov ဖြစ်ပါသည်, အတွင်းမြို့ 349 ရက်ကြာဝိုင်းရံနေစဉ်အတွင်းတစ် Franco-ဗြိတိသျှအော်တိုမန်အင်အားသုံးဆန့်ကျင် Sevastopol ၏ကာကွယ်ရေးဦးဆောင်သူကိုကျော်ကြားတဲ့ရုရှား Admiral 1854-55.
ဝိုင်းထားခြင်းစဉ်အတွင်း Kornilov ရဲ့နာမည်ကျော်နောက်ဆုံးစကားသည် — “Sevastopol ခုခံကာကွယ်!” — မြို့ဒေသခံများတစ်ဦးလိုလားတဲ့ရုရှားနိုင်ငံအစည်းအဝေးစုဝေးအဖြစ်စင်မြင့်ပေါ်မှာဤတနင်္ဂနွေရေးထိုးခဲ့ကြသည်.
ရွတ် “ရုရှားက! ရုရှားက!” သဘင် Nadezhda Babkina အဖြစ်စောင့်ကြည့်လူအစုအဝေးသီဆိုခြင်းနှင့် multi-ရောင်စုံစားဆင်ယင်အတွက်အားထုတ်, ချယ်လှယ်သော shawl နှင့်အစဉ်အလာ headdress.
လူအစုအဝေးတွေထဲမှာ 47 နှစ်အရွယ် Pavel Filipov ခဲ့သည်, မှတ်သားအနီရောင် anorak ဝတ်ဆင် “ရုရှားအမျိုးသားရေးအဖွဲ့” အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်.
– '' တစ်ပယ်ချအစားထိုးလိုပဲ’ –
“ငါဆယ်စုနှစ်များစွာအဘို့ဤအခိုက်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြ,” ဟုသူကပြောသည်. “ကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားကြသည်, ဒီမှာမဲပေးဖြစ်လိမ့်မည် 100 ရုရှားနိုင်ငံအဘို့ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။”
သူ၏ဇနီး Olga, 46, မြို့နှင့်ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံခြားသားများမှလျှို့ဝှက်စစ်ရေးဒေသများပိတ်လိုက်သောအခါဆိုဗီယက်ခေတ်ကပြန်ပြောပြသည်.
“ကျနော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးခဲ့, ကျနော်တို့ဖျာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ keys ကို left, သားသမီးပြင်ပမှာကစား. ကောင်းပါတယ်,” လို့သူကပြောပါတယ်.
မြို့အအလည်ခရီး, Sevastopol ရုရှားသမိုင်း၌ကစားခဲ့သည့်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနည်းနည်းသံသယရှိစေနိုင်ပါတယ်.
တစ်ဦးက “သူရဲကောင်းစီးတီး” ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု, Sevastopol လွှ 250,000 ဂျာမန်တပ်များသည်အတွက်ထိန်းချုပ်ယူကြသောအခါဦးသေဆုံး, ဧဒုံတပ်မတော်စစ်သားများ 1942 တစ်ကြီးကျယ်ဝိုင်းရံပြီးနောက်.
ထိုကမ်းနားတလျှောက်, စျေးဆိုင်ခရီးသွားဧည့်ဖို့အစင်းကျားသင်္ဘောသားရှပ်အင်္ကျီရောင်းချ, ထိုရေငုပ်သင်္ဘောများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့် Red Army အမှတ်တရပစ္စည်းများအတွက်သံလိုက်.
တစ်ပန်းခြံခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာထိုင်, အန္နနှင့် Larissa, ရွှေကိုအံသွားနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ 60 အတွက်အမျိုးသမီးနှစ်ဦး, သူတို့ရဲ့ထီးအောက်မှာမိုးဖွဲကနေအမိုးအကာ.
သူတို့လုပ်လိမ့်မယ် “ပျော်ရွှင်စွာ” မတ်လအပေါ်ရုရှားက join ဖို့ရိုင်းဘို့မဲပေး 16, အန်နာကပြောပါတယ်, အဘယ်သူသည်သူမ၏နောက်ဆုံးအမည်ပေးမလို.
“ဤမြို့သည်အစဉ်အမြဲရုရှားခဲ့, ဟုခဲ့ရာနေသော်လည်း, ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်း၏အစိတ်အပိုင်းဘယ်တော့မှခဲ့ကြ. ဒါဟာပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့အစားထိုးတူခဲ့ — သာနာမ၌ယူကရိန်းခဲ့ကြ. ယခုငါတို့အိမ်ပြန်သွားကြသည်,” အန်နာကပြောပါတယ်.
“ယူကရိန်းဟာအလွန်ဆင်းရဲနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးရူဘယ်အခါအရာအားလုံးသည်ငါတို့အဘို့အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်,” မြို့တော်ခန်းမ၏ Komelov ကပြောပါတယ်.
“ရုရှားနိုင်ငံဟာချမ်းသာကြွယ်နှင့်အစွမ်းထက်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်, သောယူကရိန်းဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်. ၏သင်တန်းကိုအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသဘောမတူဘူးသောသူယူကရိန်းနေဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်. ရုရှား၌နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသားများလိုပဲ။”
19655	1 ခရိုင်း, -Crimean စစ်ပွဲ, မော်စကို, ဧဒုံတပ်မတော်, ရုရှားက, Sevastopol, ဆိုဗီယက်ယူနီယံ, ယူကရိန်း
← Apple က Mac OS X ကို 10.9.3 '' Retina feature ရန်’ 4K display တွေအဘို့ mode ကို အခွင့်အရေးကိုအင်တာနက်ဥပဒေမူကြမ်းများအတွက် Web ကိုတည်ထောင်သူဖုန်းခေါ်ဆိုမှု →